Prometheus In The New Age: အမေစု ၏အဖိုးတန်သော စာတမ်း တစ်စောင်
လွတ်လပ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် လူသားတန်ဖိုး
၁၉၉၄ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ကနေ ၂၆ ရက်အထိ ကောစတာ ရီကာနိုင်ငံ (Costa Rica) ဆန်ဟိုဆေး မြို့ တွင်ကျင်းပခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ကော်မရှင်၏ အစည်းအဝေးတွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ၃ ခုကိုချမှတ်ခဲ့သည်။တတိယမြောက်ပန်းတိုင်မှာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဒိုင်နမစ်သစ်တစ်ခုကို တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု (the culture of peace)နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ယဉ်ကျေးမှု (the culture of development) တို့ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုကို နိုင်ငံတွင်းမှာသာမက နိုင်ငံတကာ စံချိန်ဖြင့် မြှင့်တင်လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုပြင်ကော်မရှင် အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု၊ ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ယဉ်ကျေးမှု တို့သည် တခုနှင့်တခု ခွဲခြား၍မရကြောင်း တင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ ထိရောက်သော အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွတ်မှုသည် ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှုခြင်း အပြန်အလှန် ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှုမှကာကွယ်ပေးခြင်းများတွင် အကျိုးရလာဒ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင် ဟာအမွန်မြတ်ဆုံး စံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီစံ ကိုမည်သည့် အစိုးရ၊ နိုင်ငံကမှ ဖက်ပြိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စစ်ဘီလူးတွေပင် ပြိုင်ဆိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှု၊ ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှု တို့ရဲ့နီးကပ်စွာ အချင်းချင်း အမှီသဟဲပြုနေမှု သဘောကိုလည်း မငြင်းဆန်နိုင်အောင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် မသေချာမရေသော ကိစ္စတရပ်လည်း ရှိနေတုန်းပါဘဲ။ အစိုးရတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုဟာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ခွဲခြားမရကြောင်း နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် မရှိမဖြစ် ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံကျင့်သုံးဖို့ အလှမ်းဝေးနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဖော်ဆောင်ရေးကို တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ဥပါယ်တံမျဉ် တစ်ခု (pretexts)လိုအသုံးချနေကြကို အထောက်အထား များစွာနဲ့တွေ့နေရပါတယ်။ အများသိကြတဲ့အတိုင်း တချို့သော အစိုးရတွေဟာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အနောက်တိုင်းရဲ့ အတွေးစိတ်ကူး (Western concept) တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စံနှုန်း တန်ဖိုးတွေနဲ့ ခြားနားကြောင်း ဆင်ခြေပေးတာတွေရှိနေပါတယ်။ အဲဒါဟာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဟာ ဒီမိုကရေစီကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ဒုတိယကို ပထမ နေရာပေးရန် လိုအပ်သည်လားကဲ့လို့ ဆိုချင်နေပုံရပါတယ်။ ယခုလို ဆင်ခြေပေးမှုတွေကြောင့်ဘဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ယဉ်ကျေးမှု တွေဟာ သေသေချာချာ စီစစ်စမ်းသပ်ခြင်းကို ခံနေရပြီး၊ မကျင့်သုံးအပ်ဘူး ဆိုပြီးပိုင်းဖြတ် ကြတာတွေတောင်ရှိလာခဲ့တယ်။ တချို့သော အစိုးရတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ခြင်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဆောင်ရွတ်လိုသော လူများ၊ နိုးကြားစိတ်များကို တားဆီးချိုးနှိမ် ဖုိ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်းများလည်းရှိသည်။
နိုင်ငံအများစုရဲ့ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Development) အဓိပါယ် ဖွင့်ဆိုဖို့ လိုအပ်မှုတွေဟာ စီးပွားရေး ပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ရပ် (သို့) အလေးထားစရာ တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ်တစ်ခု ကျော်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအဓိပါယ်သစ်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Development) ဖြစ်ရန် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု (Economic growth) သာမက အခြားအချက်တွေပါ ပါဝင်နေတယ်ဆိုနေသည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ဖရန်ကွားစ် ပါးရိုး (Francois Perroux) ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၏ အမြင်သစ်တစ်ခု (A New Concept of Development) စာအုပ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဖြစ်နိုင်သော အချက်များကိုတင်ပြထားသည်။ သူက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သည် ပြဇတ်ဆန်ဆန် အသိစိတ် နိူးကြားမှု ဖြစ်နေခြင်း၊ ကတိတစ်ခု၊ ကိစ္စတရပ် (သို့) မကြွင်းမကျန်ရပ်တည်နေရုံမှသာ ကိုယ်စားပြုနေကြမည် ဟုဖွင့်ဆိုပြသည်။ ယင်းတွင် အသိဥာဏ် ပညာ အရလည်း မှေးမှိန်သော သိမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်နေမည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းစာအုပ် နောက်ပိုင်းတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Personal development) သည် အခြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းကြီးများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ယူဆချက်သည် တိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် အခြားအခန်းကဏ တွေအတွက် စီမံကိန်းများတွင် လူသား နှင့် ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးများ (Human and Cultural values) သည် ခိုင်မာသော နေရာတွင်ရှိသည်ကို ဖော်ပြနေသည်။
ယူအမ်ဒီပီ (United Nations Development Programme) အနေနဲ့ တိုးပွားခြင်း (Growth) နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Development) တို့ကြား ခြားနားမှုကို ဖွင့်ဆိုရှင်းပြရန် ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းကာလ ကတည်းကပင် စတင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်း ကာလကတည်းကပင် UNDP ၏ လူသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ (Human Development Report) ကို ပထမဆုံး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လူသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၏ အသွင်အပြင်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ အစီရင်ခံစာ၏ အဓိကဖော်ထုတ်ချက်မှာ လူသား၏ ပါဝင်ဆောင်ရွတ်မှုကို (ကျွန်ုတို့ခေတ်၏ အဓိက ကိစ္စရပ်) (The central issue of our time) အဖြစ် မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လူသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထင်မြင်ယူဆချက်များကို အဓိကအချက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ပညာရှင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ် များတွင် ထည့်သွင်း ယူဆနေစဉ် အတွင်းမှာဘဲ ဈေးကွက်စီးပွားရေး (Market Economy) ကို ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေး အတွက် အလျှင်မြန်ဆုံး နှင့် အသေချာဆုံး နည်းလမ်း အဖြစ် အစိုးရများက သတ်မှတ်လာကြသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်မှုများသာ တိုင်းပြည်တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့တင်မြင်ယူဆ နေကြသည်။ စီးပွားရေး ကိုသာ “dues ex machina” ခေါ် “လိုလားတောင့်တနေတဲ့ အာရှသစ်အတွက် တံခါးအားလုံးရဲ့ သော့ကလောက်တွေ အတွက် အရေးပါဆုံးသော သော့တစ်ချောင်း” အဖြစ်တင်စားခဲ့ကြသည်။ ထိုအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လုံခြုံရေး စိန်ခေါ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်ယူမှု စိန်ခေါ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ စိန်ခေါ်မှု၊ တရားမျှတရေး နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စိန်ခေါ်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း နှင့် ပလူရဲလ် လစ်ဆင် (Pluralism) စိန်ခေါ်မှု ကိုအောင်မြင်စွာ ဆုံဆည်းနိုင်ရန် အတွက် “တောင့်တင်းခိုင်မာသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ကိုသာ “မရှိမဖြစ် အရာ” တခုလိုမြင်ခဲ့ကြသည်။
စီးပွားရေးကို တံခါးအားလုံး၏ သော့ကလောက်များအတွက် အရေးပါဆုံးသော သော့တံတစ်ချောင်း အဖြစ် သဘောထားလိုက်ခြင်းသည် လူချမ်းသာများ သာလျှင် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူများ ဖြစ်သွားသည်။ သူတို့၏ စီးပွားရေး လက်နက်ကိရိယာ သာလျှင် အားလုံးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် သဘောဖြစ်သွားသည်။ ဒီအချက်ဟာ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လူသားတိုို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ခံယူထားသော ကမ္ဘာတစ်ခု၏ အမြင်နှင့် ကွဲပြားခြားနားနေသည်။ ယင်းကမ္ဘာတွင် ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တို့၏ တပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်မှုသည် လူသားတို့၏ အစွမ်းသတ္တိကို ဖြစ်စေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။
ယင်းကွဲပြားသော အမြင်များသည် လူမှုရေး နှင့် အမျိုးသားရေး စရိုက်ကို ဖြစ်စေသော အမျိုးမျိုးသော အစိတ်အပိုင်းများ အဖြစ်ပိုင်းဖြတ်ရာတွင် ကွဲပြားခြားနား သွားစေသည်။ ယင်းတွင် ဆင်းရဲမှု၊ တိုးတက်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ ကိုအခြေခံအမြင်များ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ ထိုပြင် ယင်းတန်ဖိုး နှင့် အဓိပါယ်များကို မည်သူက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပါဝါ ရှိသည်လည်းပါဝင်သည်။
ယင်းတန်ဖိုးစနစ်တွင် ပါဝါရှိသူ နှင့်ပါဝါမရှိသူကြားတွင် တူညီမည်မဟုတ်ပေ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ (Privileged) နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသူ (Unprivileged) တို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ သည်လည်း မတူကွဲပြား သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါဝါ နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် အရေးကိစ္စတွင် ချမ်းသာသူ (haves) နှင့် ဆင်းရဲသူ (haves-not) ကြားကွဲပြားခြားနားမှုသည် အရည်အတွက်ဆိုင်ရာ ကွဲပြားမှုသာလျှင် မဟုတ်ပေ။ သူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် အတွေးအခေါ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွင်လည်း အတော်အတန် ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ စီးပွားရေး ကိုသာအလေးပေးသူများ အတွက် ပါဝါ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုစ္ဆာကိုသာလျှင် ဇောင်းပေးနေရ၍ မျှမျှတတ ဖြစ်ခဲသည်။
ဆင်းရဲမှု ပြဿနာသည် လူ့သားတို့အတွက် စီးပွားရေး ချဉ်းကပ်မှု သတ်သတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ ဆရာဝန်တွေ၊ အဟာရ ပညာရှင်တွေ၊ အခြား သိပံပညာရှင် တွေတောင် ဆုံးရှုံးလစ်ဟာခြင်း (deprivation) ၏ ဓမ္မဓိဌာန်ကျသော အခြေအနေတွေ အကြောင်းပြောပြနိုင်သည်။
ဆင်းရဲမှုကို တိုက်ဖျက်ခြင်းဟာ ယင်းကဲ့သို့စီးပွားရေးတစ်ခု ကိုသာအလေးထားမှုကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ပါဝါ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူတွေသာ နေရာရနေသောကြောင့် ဆင်းရဲသားတွေမှာ ပါဝါမဲ့ပြီး အသံမဲ့နေရတယ်။ ပါဝါဆိုသည်မှာ လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တစ်ခု အတွင်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဆန္ဒကိုတွန်းအားဖြစ်စေသော၊ ဖော်ထုတ်ရဲသော ဖြစ်နိုင်စွမ်းရည် (possibility) တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသားတွေမှာ တွန်းအားပေးခြင်း၊ အတင်းအကြပ် စေခိုင်းနိုင်ခြင်း၊ သြဇာလွမ်းမိုးနိုင်ခြင်း စသော စွမ်းရည်သတ္တိများမရှိနိုင်ကြပေ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း (empowerment) ဟာ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှစ်ခုစလုံး အတွက် အဓိက ကျပါတယ်။ အဲဒါဟာ နိုင်ငံ (သို့) လူမှုအသုံးအဝိုင်း အပေါ် တွန်းအားပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည် မည်သူ့တွင်ရှိသည်၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် လက်တွေ့ကျသော လုပ်ဆောင်မှုများ ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မည့်သူ ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ တပါတီအာဏာရှင် (totalitarian) စနစ် ပီပြင်လေလေ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများဟာ အုပ်စိုးသူအီလစ် (ruling elite) တို့၏ လက်ထဲတွင်ရှိလေ ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကျဉ်းမြောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်လေဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှု ကိုလည်း “ခေတ်အမှီဆုံး” (the most recent)၊ “အဆင့်အမြင့်ဆုံးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (သို့) ဘဝရဲ့ ရှင်သန်မှု နှင့် လုံခြုံမှု ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
အာဏာပိုင်အစိုးရအများစုဟာ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးမှုရှေ့မျက်နှာပြင်မှာတော့ ပေါ်လွင်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတော့ရှိကြပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ရမှာကိုတော့ တွန့်ဆုတ်နေကြတယ်။ အဲ့လို အစိုးရမျိုးတွေဟာ ခေတ် နဲ့အမီ လိုက်နိုင်ဖို့ သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခု ဆီရောက်နိုင်မယ့် အမျိုးသားစရိုက် (သို့) ပြည်တွင်းဖြစ် စံပြ လမ်းစဉ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း ဖော်ပြတတ်ပါသေးတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပြီးပြီးချင်း ဆယ် စုနှစ်များအတွင်းမှာဘဲ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (Socialism) ဟာ လူကြိုက်များလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၈၀ နှောင်း ပိုင်းကာလတွေကစပြီး ဒီမိုကရေစီဝါဒ (Democracy) ဟာ အခြေခိုင်မာလာခဲ့တယ်။ အမျိုးသားရေး (သို့) တိုင်းရင်းဖြစ်လမ်းစဉ်ဟာ ဆိုရှယ်လစ်ဇင်လား … ဒီမိုကရေစီလား … ဆိုတဲ့ အာရုံစိုက်မှုဟာ လုပ်ငန်းစဉ် (Process) နှင့် ပန်းတိုင် (Goal) နှစ်ခုစလုံးအနေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဖြစ်ခြင်း သက်ရောက်မှုများရှိနေ သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဓလေ့ထုံးစံအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ သီးခြားအသုံးအနှုန်းများအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ (သို့) ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒတစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြ သည်။ အဲ့ဒါဟာ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သူ (Arbiter) နှင့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပေးနိုင်သူ (Interpreter) ကဲ့သို့ လို အပ်သောနေရာများအတွက် နိုင်ငံရေးအီလစ်များ ဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုဖြစ်စေသည်။ ထိုသူများဟာ ယဉ် ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် (Do or Do Not) တွေကို လုပ်ဆောင် သည်။
လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေပြုတဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဟာ ယဉ်ကျေးမှုခိုင်မာမှု၊ လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှု နှင့် အမျိုးသား လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ နာမည်တွေ နဲ့တပ်ပြီး အာဏာပိုင်အစိုးရတွေရဲ့ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။ အနောက်တိုင်း လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး နိုင်ငံတွေမှာဆို ဒီမိုကရေစီကို အထိန်းအကွပ်မဲ့သော လွတ်လပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးကြည့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဝါဒတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးဘီဘင်ကြီး (Progenitor) အဖြစ် ထင်ယောင်မြင် ယောင်လုပ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း အယုံသွင်းလာတာတွေရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုး (Democratic Values) တွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တွေဟာ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေ မရှိဘဲ စွပ်စွဲတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တကယ် အကျိုးရှိအောင် လိုအပ်သလို ပြုပြင်ယူရမယ်လို့ ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မသင့်တော်သေးဘူးလို့လည်း လူတွေကို ပြောကြတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အချိန်တွေက အများကြီးပေးနေရတယ်။
ဒီလို ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ချေပမှုရဲ့ ပထမပုံစံကတော့ အမေရိကန် (USA) ဟာ ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အကောင်းဆုံး နမူနာတစ်ခုပါဘဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ အခြားယဉ်ကျေးမှုများကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့အပြင် ဒီမိုက ရေစီယဉ်ကျေးမှုရဲ့အရေးအပါဆုံး ကိုယ်စား လှယ်တော်ကြီး လိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် အချို့တွေက ဒီအချက် တွေကိုကျော်ပြီး အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကို ဣနြေ္ဒမဲ့ အရှုပ်ထုတ်ကြီးလို့ မြင်စေချင်ကြပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာဆိုရင် I-Want-It-All ဖောက်သည်ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဂါစီးတီးယဉ်ကျေးမှု (Megacity Culture)၊ စူပါပါဝါယဉ်ကျေးမှု၊ နယ်ခြားစီးခြား ယဉ်ကျေးမှု (Frontier Culture)၊ ကူးပြောင်းလာသူယဉ်ကျေးမှု (Immigrant Culture) တို့ပါဝင် သည်။ ထို့ပြင် ခိုင်မာသော မီဒီယာ ယဉ်ကျေးမှု (Media Culture) လည်းဘဲရှိသေးသည်။ ယင်း မီဒီယာ ယဉ် ကျေးမှုသည် အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ များမြောင်လှသော ပြဿနာ ပေါင်းများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု လည်းဆိုကြသည်။ ထို့ပြင် လမ်းမပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၊ မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားပြုမူ မှသည် လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအထိ ရှိသည်ဟု ဆိုကြသေးသည်။
အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုးရွားမှုများကို ဒီမိုကရေစီအမွေအနှစ် (Democratic Legacy) ဖြင့် ခြေရာကောက် ၍ မရနိုင်ပေ။ သို့သော် ခေတ်မီရုပ်ဝါဒ များ၏ တောင်းဆိုချက်များနဲ့တော့ ခြေရာကောက်နိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုးဆိုး ရွားမှုတွေကို အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးများတွေလည်း အဆင့် အလိုက် ကွဲပြားခြားနားစွာတွေ့နေရသည်။
ဆိုးရွားသော တစ်ကိုယ်တည်းလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ဝါဒ (Gross Individualism) နှင့် လည်ပင်းဖြတ်ကိုယ် ကျင့်တရားဝါဒ (Cut-Throat Morality) များဟာ နိုင်ငံရေးနှင့်အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ နှိပ်ကွပ် ခံနေရပြီး တဖက်မှာလည်း ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တိုးတက်ရေးကို တိုင်းတာနိုင်မယ့် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှု တွေရဖို့ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသော စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သောအချိန်ကာလတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု နှင့် လူ့တန်ဖိုးများဘေးရောက်ပြီး ငွေတန်ဖိုးကြီးစိုးသော လူ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာသည်။ အလုံးစုံပြီး ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံရေး (သို့) လူမှုရေးစနစ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများဟာ အနောက်တိုင်းမဟုတ်သော ယဉ်ကျေးမှုများကို ဆန့်ကျင်နေသည်ဟု ပြောဆိုနေချိန်မှာဘဲ ယင်းယဉ်ကျေးမှုများကို ကျောက်ဆစ်ရုပ်တစ်ခု (Monolithic) တစ်ခုလို ကျဉ်းမြောင်းစွာ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ သဘောထားခြင်းများ ပြုနေကြသည်။ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်လိုသော တန်ဖိုးများကို များပြားလှသော ယဉ်ကျေးမှုများတွင် တွေ့နေရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများ သည် သူတို့ရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ အလားအလာတွေ အမှန်တကယ် ဖြစ်စေဖို့ လွတ်လပ်ခြင်း နဲ့ လုံခြုံရေးကို လိုအပ်နေ ကြပါတယ်။
လွတ်လပ်ခွင့်ကို မဖျက်ဆီးဘဲ လုံခြုံရေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်သော အစိုးရတစ်ခုပုံစံတစ်ခုလို လိုလားချက်တွေဟာ အလှမ်းအလွန် ကွာဝေးနေသည်။ အရှေ့တိုင်းကော၊ အနောက်တိုင်း နှစ်ခုစလုံးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးထဲမှာ အာဏာရှင်စနစ် (dictatorship)နှင့် ကြမ်းတမ်းသောအစိုးရ (strong governments)ကို လိုလားနှစ်သက်သလို ထောက်ခံပေးနေခြင်းကိုတွေ့နေရပါတယ်။ ကြီးစိုးလိုသောဆန္ဒ နှင့် အင်အားကြီးမှုကို မြှင့်မြှောက် လိုသော စိတ်တိမ်းညွတ်ခြင်းသည် လူအများ၏ ထူးခြားတဲ့အချက် ဖြစ်ပြီး ဒီစိတ်ဟာလည်း လုံခြုံရေးအတွက် ဆန္ဒတစ်ခုမှ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုဟာ လုံခြုံရေး နှင့် လွတ်လပ်ခြင်း၏ ကာကွယ်မှုကိုဖြစ်စေသော စနစ် (System) တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံသည် တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှု နှင့် လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်နိုင်ရန် လုံလောက်သော အင်အားကို ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်း ရွေးချယ် နိုင်သည်။ ဒီရွေးချယ်မှုများကသာလျှင် အဲ့ဒီ တိုင်းပြည်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းစဉ်အတွက် မည်မျှ ပေါက်ရောက်သွားမည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် အားထုတ်နေသော တတိယကမ္ဘာမှ နိုင်ငံ များသည် လူမျိုးစု အမျိုးမျိုးပါသော လူ့အဖွဲ့အစည်း (Multiracial Societies) များဖြစ်ကြသည်။ ယင်းနိုင်ငံများ တွင် ချယ်လှယ်နေသော လူမျိုးစုကြီးတစ်ခုရှိသည်။ တခါတရံ အုပ်စုငယ်များ မြောက်မြားစွာလည်း ရှိတတ်သည်။ ဆင်းရဲခြင်းဟာ အခြေခံစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကျေနပ်ဖွယ်မကောင်းတော့သလို “ လူနည်းစု ” (Minority) သည်လည်း အရေအတွက်အားဖြင့်မျှသာ သတ်မှတ်၍မရတော့ပေ။ ဥပမာအနေနဲ့ “ မြန်မာ့သမိုင်း မှ လူနည်းစုများကို လေ့လာခြင်း ” စာတမ်းတစ်ခုတွင် တွေ့နိုင်သည်။
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူနည်းစုများ၏ အထင်အမြင်သည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုက သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သောအခါ အခြားအုပ်စုများသည် လူ နည်းစုများ ဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် မိရိုးဖလာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူနည်းစုများရှိနေခဲ့ပြီး ပါဝါအီလစ် (Power Elite) များနှင့် နီးစပ်သောသူများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ အထက်တန်းကျသူများအဖြစ် တွေးထင်နေကြပြီး ပါဝါအီ လစ်များနဲ့ အလှမ်းဝေးသူများကို အဆင့်နိမ့်ကျသူ (Inferior) များအဖြစ် တွေးထင်နေကြသည်။ လူများစု တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် စံနှုန်းများကို လူမျိုးရေး (Race) သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားအုပ်စုကို အခြေပြုခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ပါဝါပိုင်ဆိုင်မှုကို အခြေပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူနည်းစုများဟာ ပါဝါအားနည်းသော လူများဖြစ်ကြရသည်။
နောက်တစ်ဖန်ဆင်းရဲခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အဲ့ဒါဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စ တစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။ အခြေခံ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသည် လူနည်းစုအုပ်စုများနှင့် တိုင်းရင်းသားများအတွက် သူတို့ဟာ နိုင်ငံတော်၏ စစ်မှန်သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ခံစားမိအောင် လုပ်ရာမှာ မဖူလုံ၊ မလုံလောက်ပေ။ ယင်းကြောင့် သူတို့ကို ယုံကြည်မှု ရှိစေရမည်။ သူတို့ဟာ နိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာကို ပုံဖော်ရာမှာ ပါဝင်နိုင် လောက်အောင် တက်ကြွသော အခန်းကဏ္ဍတွေရှိသည်ဟု ယုံကြည်မှုရှိစေရမည်။ ဆင်းရဲမှုဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လုံးကို ဂုဏ်သိက္ခာကျစေပြီး လူနည်းစုတွေ၏ မကျေနပ်ချက်များသည် နိုင်ငံတွင်းနှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်သည်။ အာဏာသည် လူနည်းစုသာပါသော လူတစ်စု ၏ လက်တွင်သာ စုပြုံနေသော တိုင်းနိုင်ငံများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများသည် အစဉ်အမြဲဖြစ်ပေါ်နေမည်။
အလွန်လျှင်မြန်သော စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု အစီအစဉ်များ အတွင်း၌သာ အောင်မြင်နိုင်သည်ဟု အာရှသစ်ကော်မရှင် (The Commission for New Asia) မှ ဖော်ပြသည်။ ယင်းတွင် လူမှုတည်ငြိမ်ရေး၊ ပြည်သူ့အစီအစဉ် (Public Order) နှင့် အသိပညာ မြှင့်ပြီး ခိုင်မာသော အစိုးရများရှိကြပြီး လူမှုရေးအဓိကရုဏ်းများနှင့် ကသောင်းကနင်းဖြစ်မှုများမရှိဟု ဆိုထား သည်။
ယင်းဝေဖန်ထောက်ပြချက်များသည် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေးတို့အကြား ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လိုလားတောင့်တဖွယ်ကောင်းသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အစီအစဉ်များကိုသာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်သွားနိုင်သည်။ ယင်းအချက်သည် အန္တ ရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုလိုအဓိပ္ပါယ်ကောက်ခြင်း (Interpretation) သည် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လုံခြုံရေး အဓိ ပ္ပါယ်ကို လွဲသွားစေသည်။ ခိုင်မာသော အစိုးရနှင့်အာဏာပိုင်များ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ထိန်းညှိရန် အတွက်လည်း ယင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအသုံးချနိုင်သည်။
ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်လာခြင်းသည် လူသားတို့၏ ပျော်ရွင်မှုအတွက် အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ လူသား၏ စိတ်ဝိဥာဉ်ကိုလည်း နာကျင်စေသည်။ ရေရှည်တွင် လူသားတို့ကို ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက် စေနိုင်သည်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို လမ်းပွင့်စေပြီး စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုသာ လူသားတို့၏ လိုအပ်ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုသော ဘောင်တစ်ခုထဲအတွင်း၌ လုပ်ဆောင်စေသည်။
အခွင့်အာဏာပေးခြင်း (Empowerment) သို့တဖန် ပြန်ရောက်သွားသည်။ ယင်းသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အကျိုးကျေးဇူး ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်မှုကို လုပ်နိုင်သော ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အတိုင်းအတာကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဒီမိုကရေစီကဲ့သို့သော ပြည်သူုကိုအခွင့်အရေးပေးအပ်ဖို့ ရည်ရွယ်သော နိုင်ငံရေးစနစ်သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် ပြည်သူုအတွက် ပြည်သူုတွေက လုပ်ဆောင်လိုက်သော ပြည်သူ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Development of the People for the People by the People) ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေဟာ သူ့ပြည်သူတွေ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် သူတို့၏ ဘ၀ကို သက်ရောက်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းသစ်များကို ရှာဖွေပေးရမည်။ အဲ့လိုမလုပ်ရင်ဖြစ်စေ၊ အချိန်မီမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ဖြစ်စေ၊ မချုပ်တည်းနိုင်တော့သော ပြည်သူတို့၏ အုံကြွခြင်း ဒီရေဟာ မပျော့ပြောင်းသောစနစ်နှင့်မလွဲမသွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒါဟာ မင်းမဲ့အခြေအ နေ (Anarchy) နှင့် ကသောင်းကနင်းဖြစ်မှု (Chaos) ဆီ ဦးတည်သွားလိမ့်မည်။ လျှင်မြန်သော ဒီမိုကရေစီဖော် ဆောင်ရေး နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (Civil Society) ကို တောင့်တင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများဟာ အသင့် တော်ဆုံးသော တုန့်ပြန်မှုဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေ ပထမဆုံးဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လည်း ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်း ဖို့ အချိန်ကာလ အတော်ကြာအောင် ကြိုးစားခဲ့ကြရတာဘဲလို့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တုန့်ဆိုင်းနေ သော အာဖရိက နှင့် အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ ဆင်ခြေသည် အခြေအမြစ်မခိုင်လုံပေ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုရာမှာ လူတွေနဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်များမရှိကြောင်းကို ကမ္ဘာ့သမိုင်း တွေက သက်သေပြနေသည်။ ထို့အပြင် နောက်ပေါက်နိုင်ငံများ (Latecomers) သည် ရှေးဦးနိုင်ငံများ၏ အတွေ့ အကြုံအများကို အသုံးချနိုင်သည်။ အမှားတွေနှင့်အတားအဆီးများ ရှောင်နိုင်သည်။
“ အမြန်လုပ် အနှေးဖြစ် ” (Making Haste Slowly) သည် တစ်ခါတစ်ရံ တိုးတက်ဖို့လုပ်ရင်းကနေ နောက်ပြန် ရောက်သွားသည့်သဘာဝကို ဆိုသည်။ သို့သော် တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ နှောင့်နှေးခြင်း (Slowly) ကို အလွန်အမင်း အလေးပေးနေခြင်းသည် ဘေးအန္တရာယ်အတွက် ဆေးညွှန်း တစ်ခု (Recipe) လို ဖြစ်သွားနိုင် သည်။
ဒီမိုကရေစီအစိုးရပုံစံကို လက်ခံကျင့်သုံးနေသော နိုင်ငံများအတွင်းမှာပင် ဒီမိုကရေစီကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျင့် သုံးနေကြသည်။ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီ (Western Democracy) ပုံစံတစ်မျိုးတည်း ရပ်တည်နေခြင်းမဟုတ် သလို အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဆွစ်ဇာလန် ကဲ့သို့ သော လက်တစ်ဆုပ်စာနိုင်ငံများအတွက်သာ ဒီမိုကရေ စီကို ကန့်သတ်ပေးထားတာလည်း မဟုတ်ပေ။ ဒီမိုကရေစီသည် အရှေ့ဥရောပ (Eastern Europe) သို့ ပျံ့နှံ့လာ သည်နှင့်အမျှ အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီပုံစံများသည်လည်း ကွဲပြားမှုတိုးလာကြသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ များတွင် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် စရိုက်လက္ခဏာများရှိလာကြသည်။ အလားတူစွာဘဲ အာရှဒီမိုကရေစီ (Asian Democracy) သည်လည်း ပုံစံတစ်ခုတည်းမဖြစ်နိုင်ပေ။ နိုင်ငံတစ်ခုချင်း အလိုက် သူတို့၏ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် စီးပွားရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော သီးခြားလက္ခဏာတစ်ခုကို ဒီမိုကရေစီစနစ်က ဖြစ်ထွန်း စေလိမ့်မည်။ ယင်းသည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ အခြေခံလိုအပ်ချက် လည်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်သူတို့သည် သူတို့တိုင်းပြည်၏ အစိုးရထံတွင် အထူးတလည်ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် လုံလောက်သော အခွင့်အာဏာများကို ပြည်သူအားပေးအပ် ထားသင့်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (The Universal Declaration of Human Rights) ၏ အပိုဒ် ၃၀ စလုံးသည် ပြည်သူထံအခွင့်အရေးပေးအပ်ဖို့သာ ရည်ရွယ်နေသည်။ ယင်းလူ့အခွင့်အရေးများမရှိလျှင် ဒီမိုကရေစီဓလေ့စရိုက်သည်လည်း အခွံချည်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ် စေမည်မဟုတ်ပေ။ အာဏာပိုင်များ၏ ကျူးကျော်ဖေါက်ဖျက်မှု ကိုလည်း ခုခံနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်သည် အကြမ်းမဖက်ဘဲ နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးသည်။ ဒီမိုကရေစီ၏ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း နှင့် ငြင်းခုံခြင်းဓလေ့သည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ လုပ်စရာမလို ဘဲ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်စေသည်။ ဒီမိုကရေစီ နှင့်လူ့အခွင့်အရေးယဉ်ကျေးမှုသည် ကွဲပြားခြားနားမှုမ ရှိစေဘဲ ညီညီညွတ်ညွတ်၊ အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်လိုစိတ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးသည်။ အဲ့ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ခွဲခြားထား၍ မရကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းများ မှတဆင့် ပြည်သူလူထုကို အခွင့်အာဏာပေးအပ်ဖို့ ရှာဖွေရမည်။ သို့မှသာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် ငြိမ်းချမ်းရေး ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုယဉ်ကျေးမှု မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဆီသို့ (Toward Global Community)
ကျမရဲ့တင်ပြချက်ကို နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ လူသားတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Economic Growth) ဖြစ်ရုံနဲ့တင် မပြည့်စုံနိုင်ပါ။ ၎င်း၏ ဗဟိုချက်မှာ အခွင့်အာဏာပေးအပ်ခြင်း နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုပြည့်ဝမှု (Inner Fulfillment) တို့ဖြစ်သည်။ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသော အီလစ်များ၊ တရားလက် လွတ်ဆန်ဆန်ပြုမှုကျင့်ကြံနေကြသော နိုင်ငံရေးဦဆောင်မှုတွေရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့တစ်ခု ရှိနေသည်။ ယင်းကမ္ဘာတစ်ခုတွင် လူသားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးများ အလွန်အရေးပါစေရန် အခွင့်အာဏာပေးအပ်ခြင်း နှင့် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အလိုပြည့်ဝမှု အချက်များကသာလျှင် ဖော်ဆောင် ပေးသည်။ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေး အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် ပြည်သူလူထု၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကာလ၏ အဓိကကျ သော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုမှသာ လွတ်မြောက်ခြင်း (Liberation) သည် ထိန်းချုပ်ခြင်းအထက်ကရှိသော၊ လူသားတန်ဖိုး (Human Worth) သည် အာဏာပါဝါအထက်ကရှိနေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများတည်ဆောင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ဒီပုံစံအရဆိုလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Development) သည် စစ်မှန်သော လူ့အခွင့်အရေးများရှိသော ဒီမိုကရေစီကိုသာ လိုအပ်နေသည်။
ဒီမိုကရေစီရလျှင် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် သူ့အလိုလိုတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်သွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီး လိုက်သည်။ ယင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူသားအားလုံးသည် တန်ဖိုးရှိကြပြီး လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ တန်ဖိုးကိုလည်း နားလည်သွားစေသည်။ ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းသည်လည်း ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လာသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်သည် ဆင်းရဲသူများနှင့် သူတို့ကမ္ဘာ၏လမ်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲ စေသည်။ သူတို့ကို ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ။ သူတို့၏ အနာဂါတ်ကို သူတို့ဘာသာ ပုံဖော်နိုင်တဲ့ အသိစိတ်ဓါတ် ရှိသွားစေရမည်။ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အစိုးရများ (Totalitarian) အများစုကတော့ ပြောင်းလဲမှုကို ကြောက်ရွံ့နေမှာဘဲ။ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်များအနေနှင့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးကို တုန့်ဆိုင်းနေသည်နှင့်အမျှ သူတို့၏ အပြုသဘော ဆောင်ရွက်ချက်များ သည်ပင်လျှင် အလာဟသ ပျက်ယွင်းသွားနိုင်သည်။ နိုင်ငံ့ပေါ်လစီအောင်မြင်ခြင်းသည် ပြည်သူတို့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများသည် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ဆန့် ကျင်နေသည်ဟု ပြောဆိုနေသည်များလည်းရှိသည်။ လူများကလည်း အစိုးရအတွက် “ မသင့်တော်ပေဘူး ” ဟု ထင်မြင်လာအောင်လုပ်နေသည်များလည်းရှိသည်။ အမှန်တရားနှင့်အလွန်ဝေးကွာနေသော အရာမရှိပါ။ ယခု ကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကတော့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မတူကွဲပြားနေကြတဲ့ နိုင်ငံများ၊ ပြည်သူများက လူ့တန်ဖိုး၏ အခြေခံကျသော အချက်တစ်ခုအပေါ် သဘောတူညီရေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအချက်သည်သာ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အင်အားတစ်ရပ် (A Force) အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သော စီးပွားရေး အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုသည်မှာလည်း နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုဖြစ်စဉ်များ မှသာဖြစ်လာနိုင်သည်။ လျှင်မြန်သော ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးနှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်သာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် မရှိမဖြစ်အရာ (sine qua non) ဖြစ် သည်။ သို့မှသာလျှင် လူသားတွေကို တန်ဖိုးထားသော အနာဂါတ်တစ်ခုကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ (United Nations) နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ပြည်သူကို အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းနိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများကို အားပေးထောက်ပံ့သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းလှုပ်ရှားမှု များသာလျှင် ဒီမိုကရေစီကို တည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို တနေ့သောအခါတွင် မလွဲမသွေဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ၁၉၉၁ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်း ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ဇူလိုင်လ မှစ၍ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များ၏ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထား ခြင်းကို ခံနေရပြီး ဒီဟောပြောချက်မိန့်ခွန်းကို ၁၉၉၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ကော်မတီရှင် (The World Commission on Culture and Development) အစည်းအဝေးအတွက် “ Empowerment foraCulture of Peace and Democracy ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ သူမကိုယ်စား ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်း ကိုရာဇန် အကွီနို (Corazon Aquino) က ဖတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေစု မျှော်မှန်းသော ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ။
မလေးရှား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် (Amnesty International) အဖွဲ့ကြီးက ပြုလုပ်ကျင်းပသော ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲ တွင် ဖြန့်ဝေရန် မြန်မာဒုက္ခသည်များ အစည်းအရုံး (BRO) မှ ဘာသာပြန်ပေးရန် အကူအညီတောင်းသဖြင့် ကျွန်တော် ဘလော့ခ်ဂါ အလင်းဆက် မှ ကြိုးစားပြီး ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန် လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော် အမေအရင်းတစ်ယောက်လို အလွန် လေးစားချစ်ခင်ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အလွန်ကောင်းသော သုတေသန စာတမ်းတစ်ခုကို အမေ့မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်အရ ဖော်ပြခွင့်ရ၍ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိမိအနည်းငယ် နားလည်တတ်မြောက်ထားသော အသိပညာ ဖြင့် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် အနည်းငယ် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလို့လည်း ကျေနပ်ပါမိပါတယ်။ အမေစု အပါအဝင် အမှန်တကယ် ပေးဆပ်နေသူအားလုံးကို ရင်ထဲကနေ လေးစားဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းရှိပါက ကျွန်တော်၏ ဘာသာပြန် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပါရစေ။
ဘာသာပြန်။ ။ဘလောခ့်ဂါ အလင်းဆက် (၉. ဇွန်လ. ၂၀၁၀)
စီစဉ်သူများ။ ။ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ ဘလော့ခ်ဂါ ခမိခဆဲ
Posted by အလင်းဆက် at 9:40 PM